‘नयाँ पुस्तालाई ज्ञानको उद्यमसँग जोड्दैछौं’ « Loktantrapost
‘नयाँ पुस्तालाई ज्ञानको उद्यमसँग जोड्दैछौं’
१४ फाल्गुन २०७५, मंगलवार २२:३९
हरि तिम्सिना ः संयोजक, कला साहित्य उत्सव
कला साहित्य उत्सव २०७५ सङ्घारमा छ । रिडर्स झापाले काँकरभिट्टामा हरेक दुई वर्षमा आयोजना गर्दै आएको यो कार्यक्रमको द्रुत तयारी भइरहेको छ । साहित्य, संस्कृति, कला, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र इत्यादि क्षेत्रमा अध्ययन अन्वेषण गरेका विषय विज्ञहरु भेला गरेर छलफल सत्र, सम्भाषण र संवाद गराउने यस कार्यक्रमबारे उत्सव संयोजक हरि तिम्सिनासँग लोकतन्त्र पोस्टले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
हरेक दुई वर्षमा कला साहित्य उत्सवको आयोजना गर्नुहुन्छ ? उत्सव आयोजना गर्नुका उद्देश्य के के हुन् ? तय गरिएका उद्देश्य पूरा भएका छन् ?
हामी बाँचेको समाज र दुनियाँबारे बुझाई गहि¥याउने सामान्य प्रयास स्वरुप कला साहित्य उत्सवको आयोजना गरिएको हो । रिडर्स झापाले दुई वर्षभरि सार्वजनिक बहस शृङ्खला सञ्चालन गर्छ । कहिले कुनै विषय विज्ञ बोलाएर, कहिले हामी सदस्यहरु माझ आपसमा तयारी गरेर त्यस्ता छलफल चलाउँछौँ । यी छलफल आन्तरिक छलफल होइनन्, सार्वजनिक सूचना जारी गरेर, इच्छुकहरुलाई सहभागिताका लागि अनुरोध गरेर छलफल चलाइन्छ । दुई वर्षमा एक पटक भने ती छलफलहरुको वृहत् रुप प्रस्तुत गर्छौँ । साथमा, कलाका विभिन्न विधा समेतलाई जोडेर कला, साहित्य, विचार मन्थनलाई उत्सवी माहोलमा परिणत गर्छौँ । यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य सार्वजनिक वृत्त चलायमान बनोस्, समाजमा वैचारिक र गम्भीर विषयमा विमर्श गर्ने परम्परा स्थापित होस् भन्ने हो । त्यसमा प्रभाव सिर्जना गरेका छौँ । यस्ता विमर्शले हाम्रो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग गर्छन् । अर्को उद्देश्य नयाँ पुस्तालाई ज्ञानको उद्यमसँग जोड्ने पनि हो । त्यसमा पनि विस्तारै प्रभाव फैलिँदैछ । काँकरभिट्टा कला र साहित्यको उत्सव मनाउन सक्ने बौद्धिक सहरका रुपमा परिचित भएको छ । हाम्रा उद्देश्य पूरा भएका छन् ।
तपाईँहरुले गर्ने छलफल र यी उत्सवहरुले नयाँ पुस्तामा प्रभाव पारेका प्रमाण के छन् ?
हामीले आयोजना गरेका छलफल र उत्सवमा सहभागिता जनाएका युवा साथीहरु अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । दमक र विर्तामोडबाट हरेक सनिवारका छलफलमा सहभागिता जनाउने युवा साथीहरुको सङ्ख्या बढेको छ । साथै, समाजशास्त्र र मानवशास्त्र जस्ता विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका साथीहरुले हाम्रा खुला छलफलबाट धेरै सहयोग पाएको बताउनुहुन्छ । कतिपय साथीहरुलाई ती विषयमा पढाइने अनेक अध्याय बुझ्न र परीक्षा पास गर्न समेत हाम्रा छलफलले सहयोग गरेको बताउनुहुन्छ । त्यही क्रममा हाम्रो सदस्यका रुपमा अध्ययन गर्न थाल्नु भएकामध्ये दुई÷तीनजना साथीहरु पत्रकारिता र लेखन क्षेत्रमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ । हाम्रो कार्यक्रमका दौरान आयोजना हुने लेखन र कविता कार्यशालामा भाग लिएका विद्यार्थीहरुले लेखनमा राम्रो प्रगति गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ । साथै, उत्सव आयोजनामा सदैव हामीसँगै हिँड्ने अरु दुई संस्थाहरु देही आर्ट्स र परिवर्तन थिएटरले आ–आफ्ना क्षेत्रमा एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै गएका छन् । ती युवा साथीहरुले पाएको सफलता हाम्रो पनि सफलता हो ।
तपाईँहरुको कार्यक्रम सूचीमा तीन दर्जन बढी वक्ताहरु हुनुहुन्छ । प्रायः वक्ता सबै झापा बाहिरका हुनुहुन्छ । खर्चको आयतन बढ्दै छ ?
हामीले लगभग रु. १२ लाख ५० हजार खर्च हुने अनुमान गरेका छौँ । नेपालका ठूला सहरमा आयोजना भइरहेका र हुनलागेका हाम्रो जस्तै साहित्य मेलामा लगभग ६० लाख खर्च हुने गरेको छ । हाम्रो र ती कार्यक्रमका प्रभाव तुलना गर्नेले हामीलाई स्याबासी दिने गरेका छन् । हामी अत्यन्त किफायती भएर यति ठुलो आयतनको कार्यक्रम गर्छौँ । कार्यक्रम मेचीनगरमा हुने र यहाँको संस्थाले गर्ने भए पनि यो सिङ्गो मुलुकको कार्यक्रम हो । भारतबाट पनि हामीले वक्ताहरु निम्त्याएका छौँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति भएकी र संसारभर सम्मानित लेखिका अरुन्धती रोयलाई समेत निम्तो दिएका थियौँ । हाम्रो कार्यक्रमबारे थाहा पाउँदा उहाँ अत्यन्त हर्षित हुनुभएको थियो । तर कला साहित्य उत्सव हुने मितिमा उहाँको बङ्गलादेश जाने तय भएको रहेछ, आउन पाउनुभएन । कार्यक्रमका विषय, यहाँ गरिने बहस र यहाँ उठेका विषयले पारेका प्रभावको तुलनामा खर्चको आयतन अत्यन्तै सानो हो । हाम्रो उद्देश्य नै थोरै खर्चमा र बजारको दबाबविना कार्यक्रम सफल बनाउने हो । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ र अहिलेसम्म सफल छौँ ।
सबै बाहिरका मान्छेलाई वक्ता बनाउने र स्थानीयलाई श्रोतामा सीमित गरेको आरोप छ नि तपाईँहरुलाई ?
हरेक आलोचनालाई हामीले स्वागत गरेका छौँ । त्यस्ता प्रतिक्रिया आउनुलाई हामीले हाम्रो कार्यक्रमले सिर्जना गरेको चासो र प्रभावका रुपमा पनि लिन्छौँ । आलोचना अनुसार सच्याउने ठाउँ भए हामी त्यसमा पनि उत्तिकै सचेत बन्छौँ ।
स्थानीय कर्मठ मानिसहरु प्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ । यहाँका बौद्धिकहरुसँग हामीले बारम्बार छलफलहरु आयोजना गरेका छौँ । उहाँहरुलाई सुनेका छौँ । कला साहित्य उत्सवमा हामी प्रायः विषय विज्ञ एवम् वर्तमान वैचारिक डिस्कोर्सलाई प्रभाव पारिरहेका बौद्धिकहरुलाई निम्त्याउँछौँ । त्यसैका लागि हो यो उत्सव । त्यस्ता बौद्धिकलाई बाहिर र भित्रको ट्याग लगाइरहनु पर्दैन । हामीसँग स्रोतको अभाव नभए हामीले काँकरभिट्टा ल्याउन चाहेका थुप्रै वक्ता छन् । अमेरिकाको एम.आई टी. विश्व विद्यालयका इमेरिट्स प्रोफेसर नोम चोम्स्की जो साम्राज्यवादको कटु आलोचक र वर्तमान दुनियाँको घगडान बौद्धिक हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याउने चाहना छ । न्यू योर्क विश्व विद्यालयका मानवशास्त्रका प्रोफेसर डेभिड हार्भेलाई पनि निम्तो दिन मन छ । उहाँ माक्र्सवाद र खासगरी माक्र्सको पुँजीका सबैभन्दा राम्रो व्याख्याता मानिनु हुन्छ । वातावरण सम्बन्धी सबैभन्दा प्रस्ट रुपमा लेख्ने र बोल्ने अभियन्ता नाओमी क्लिन एवम् काला जातिका प्रतिरोधी स्वर बोल्ने केन्याली न्गुगी थियोँगो जस्ता लेखकलाई पनि बोलाउने इच्छा छ । काँकरभिट्टामै बोलाएर सुन्न मन भएका अर्का विद्वान हुनुहुन्थ्यो, सामिर अमिन । उहाँ भर्खरै बित्नुभो । हामीलाई दुःख लागेको छ । स्रोत जुटाउन सकेका दिन यस्ता विद्वान्हरु काँकरभिट्टा आउनेछन् । आफ्ना विचार राख्नेछन् । काठमाडौँ र दिल्ली मात्रै होइन, अमेरिका र केन्यासम्म पुग्ने इच्छा छ । त्यसो गर्न सकेको दिन हामीलाई गौरव महसुस हुनेछ । भारतीय धार्मिक गुरुका प्रवचन सुन्न करोडौँ खर्च गर्ने झापाली सहरहरुले यस्ता बौद्धिकसँग सङ्गत गर्न केही लाख रुपैयाँ खर्च गर्न किन पछि पर्नु ?
कला साहित्य उत्सवमा लाग्ने खर्च जुटाउन कत्तिको सहज छ ?
सहज छैन, असाध्यै गाह्रो छ । फुटबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन जस्ता टुर्नामेन्ट आयोजना जति सहज हुन्छ, कला साहित्य उत्सव त्यसको तुलनामा तीन गुणा बढी अप्ठ्यारो हुन्छ । पहिला त हामीलाई यो कार्यक्रमबारे सहयोग गर्न सक्ने व्यक्ति र संस्थाहरुलाई बुझाउन नै हम्मे पर्छ । बौद्धिक कर्ममा रुचि भएका मान्छे परे सहज हुन्छ, नत्र साहित्य र समाजबारे बहसका लागि सहयोग गर्न सहजै कोही तयार हुँदैन । तर केही स्थानीय संस्था र व्यक्ति एवम् केही बाहिरका व्यक्ति र संस्थाले सहयोग नगरेका भए हामीले चौथो पटक यो आयोजना गरिरहेका हुँदैन थियौँ । यस पटक हामीलाई मेची नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । त्यो सहयोगको आयतनअझै बढ्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । त्यस्तै अन्य स्थानीय सरकारहरुले समेत केही सहयोग गर्नुहुनेछ । त्यस्तै यहाँका सहकारी र विद्यालयहरुको पनि सदाशयता छ । एनएमसी जस्ता केही स्थानीय संस्था तथा व्यापारी र अन्यत्रका संघसंस्थाले समेत सहयोग गरेका छन् । हामीले निम्ता गरेका आधा जति पाहुनालाई यहाँ ल्याउन र फर्काउन बुद्ध एयरले सहयोग गरेको छ । काठमाडौँको थेम्स कलेजले पनि सहयोग गरेको छ । त्यस्तै हाम्रो व्यक्तिगत सम्पर्कमा भएका र विदेशमा बसेर काम गर्ने साथीहरुले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ । उहाँहरुप्रति हामी कृतज्ञ छौँ ।
कला साहित्य उत्सव सकिएपछि रिडर्स झापाका अरु योजना के छन् ?
हामी फेरि विभिन्न विषयमा सार्वजनिक विमर्शका साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजना गर्छौँ । आलोचनात्मक चिन्तनको विस्तारका लागि उपयोगी हुने कोर्स डिजाइन गरेर रिडिङ सेसनहरु गर्छौँ । साथै, सामान्य स्रोत जुटाउन सक्यौँ भने छोटो समयको लेखन कार्यशाला गर्ने योजना पनि छ । स्थानीय सरकार वा अरु कुनै सक्षम संस्थाले साथ दिए काँकरभिट्टामा राम्रो पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि छ । यसअघिका साना आयोजनाका निम्ति हामी सदस्यहरुले नै आफ्नै खर्च कटाएर स्रोत जुटाउँदै आएका छौँ । कसैले सहयोग नगरे यस पटक पनि हामी त्यही क्रमलाई दोहो¥याउँछौँ । साथै, नयाँ युवा साथीहरुका लागि अनलाइन मार्फत सदस्यता फारम खोलेर आह्वान गर्छौँ । उल्लेख्य युवा साथीहरुको संलग्नतामा अध्ययन र विमर्श जारी राख्ने छौँ ।